( ရန်ကုန် – ရွှေကူ – ရန်ကုန် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ( ရန်ကုန် – ရွှေကူ – ရန်ကုန် )	15
( ရန်ကုန် – ရွှေကူ – ရန်ကုန် )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Apr 24, 2015 in Photography, Travel | 15 comments
ဧပြီ ၉ ရက် အောင်မင်္ဂလာကားကြီးဝင်း
ဧပြီ ၉ ရက် မန္တလေးသို့ နေကြာအိပ်စပရက်စ်
ဧပြီ ၁၀ ရက် မန္တလေး မှ ရွှေကူ သို့
ဧပြီ ၁၁ ရက် ကျွန်းတော်ဘုရား သို့
တစ်တီတူး တွန်ကြူးကျော် ကျွန်းတော်ဘုရားပေါင်း
ဧရာဝတီ ဒုတိယမြစ်ကျဉ်းကို လှမ်းမျှော်ရင်း
အကို ၊ ယောက်ဖ ၊ တူတော်မောင်များ ရဟန်းခံရှင်ပြု ၊
၈၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရှင် ကြီးကြီးလှိုင် ( အမေ့အမကြီး )
ညီတွေကို လိုက်ပို့တဲ့ အကိုတော်
ရွှေကူ မှ မန္တလေး သို့
ရွှေလီမြစ် ( ရွှေလီတံတား ငအိုး )
တမာလမ်းကို ပြန်ခဲ့ပါ ၊
ခဏနားမယ့် အကို့စက်ရုံ ဧပြီ ၂၀ ရက်
အောင် မိုးသူ says: ဖွားဖက်တော်ပန်းလေးကို အနီးကပ်ရိုက်ထားရင်သိပ်ကောင်းမှာ မမြင်ဖူးဘူးလေ။ ပွင့်တာတော့ ဝေနေအောင်ပွင့်တယ်နော်။ အင်ကြင်းကတော့ မြင့်မြတ်တဲ့ပန်းလို့ ကိုယ့်ဖာသာ မှတ်ယူထားတယ်။ ရနံ့ကိုလည်း နှစ်သက်မိ။ ရွှေကူကိုတော့ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးဘူး။ သွားလည်ချင်မိပါဘိ။ သွားချင်တဲ့နေရာတွေတော့ များနေပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အဲဒီပန်းကို ဂျပန်ချယ်ရီလို့လည်း ခေါ်သတဲ့ ၊
ရွှေကူက သွားဖို့ မခက်တော့ပါဘူး ၊ မန်းကနေ ညနေ ၃ နာရီကားက ည ၂ နာရီဆို ရွှေကူဝင်ပြီ ၊
အောင် မိုးသူ says: အပင်ကို မြင်ဖူးချင်မိတယ်။
ခင်ဇော် says: ဆွေမျိုးတွေ ဆီ ပြန်ရတဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းးး
တောင်ပေါ်သား says: အပြန်ကြတော့ လွမ်းသဗျာ
Wow says: ရွှေကူက ကချင်ပြည်နယ်မာလား.. မသိလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: ဆရာမကြီးရွေကူမေနှင်းစာက.. သတင်းစာမှာပုံနှိပ်ပါသွားပြီမို့…
ဆိုတော့..ရွေကူရဟန်းခံပွဲ.. ငါးပါးသီလထဲက.. သုရာမေက.. မန္တလေးအထိမခံဘူးပေါ့..
နောက်တာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ကျနော်က ရဟန်းခံထဲ မပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinn Z says: ဒီလထုတ် သူကြီးရဲ့ သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ ဆရာမ ရွှေကူမေနှင်းရဲ့ စာမူလေး…အတော် ကောင်းတယ်လို့…
မတူသော အတွေးနဲ့ ရေးတဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာဆိုတာ အဲ့ဒါမျိုးကြီးထင်…. —
ခရီးတွေ သွားပြီး ရင်း သွားချင်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကိုမျိုး ပျောက်နေတာ ခရီး ထွက်နေတာကိုး။
သူကြီး ရဲ့ သတင်းစာ ထဲ က အန်တီ့ ရဲ့ ဆောင်းပါး လေး ကို တော်တော်လေးနှစ်ခြိုက် မိ တယ်။
သူ က တစ်ဆင့်ပြန်မျှ ပေးထားတဲ့ Reconciliation ဆိုတာလေး ကိုလဲ ချဲ့တွေးဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ကျေးဇူးပါ လို့ ပြောပေးပါရှင့်။
မရောက်ဖူးတဲ့ အထက်ပိုင်း ကို ခေါ်သွားလို့ လဲ ကျေးဇူးပါ။
ရွှေကျင် နားမှာ ဧရာဝတီ ရဲ့ မြစ်ကျဉ်း တစ်ခု ရှိတယ်လို့ သင်ဖူး မှတ်ဖူးလားလို့။
ကျွန်မ လဲ ဧရာဝတီ ရဲ့ အလှ ကိုစွဲလန်း ပြီး ရူးသွပ်သူ မို့ ဘယ်တော့မှ မရိုးတဲ့ ရေပြင်အလှ ကို ငေးပြီး လွမ်းသွားပါတယ် ကိုမျိုးရေ။
တောင်ပေါ်သား says: ရွှေကူအထက်မှာ ဒုတိယမြစ်ကျဉ်းပါ အရီးရေ
naywoon ni says: ၀င်​လာခဲ့မယ်​ဆိုလို့​စောင့်​​နေတာ မလာ​တော့ဝမ်းနဲ၏ ။
တောင်ပေါ်သား says: အဘနီရေ ၂၀ ရက်နေ့လည် ရမည်းသင်းရောက်
၂၁ ရက်နေ့အတွက် ဘာကားလက်မှတ်မှ မရှိတော့လို့ ၂၀ ညကားနဲ့ တန်းပြန်ခဲ့ရတာ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2278
Ma Ei says: ငုစပ် ချယ်ရီပင်ကြီး တစ်ပင်လုံးပွင့်နေတာ လှလိုက်တာ…
မေမြို့ မှာ တွေ့ဘူးတာထက်ကို ပိုလှနေလိုက်တာ…
ဓာတ်ပုံက နဲနဲဝါးနေသလိုဘဲ …သေချာရိုက်လာတာ (ဒီထက်လှတာ) ရှိသေးလားဟင်
တစ်ပင်လုံးပေါ်အောင် အဝေးကလိုက်လိုက်တာ ၊